Real Madrid oo dacwad ku oogeysa Wargeys ka soo baxa dalka Portugal? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Real Madrid oo dacwad ku oogeysa Wargeys ka soo baxa dalka Portugal?
Published on October 11, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(11-10-2018) Maamulka kooxda Real Madrid ayaa shaaca ka qaaday in ay dacwad ku soo oogi doonaan Wargeyska ka soo baxa dalka Portugal kaas oo Arbadii daabacay War ku saabasan dacwada Kufsiga ah ee loo haysto Cristiano Ronaldo.
Wargeyska Correio da Manhã ayaa shaaca ka qaaday in Real Madrid qayb ka ahayd in laqariyo dacwada loo haysto Ronaldo isla Markaan ay lacago laa luusha ah siiyeen Gabadha dalka Maraykanak iyaga oo diidanaa in fadeexadaan banaanka u soo bado waxna u dhinto sumcada kooxda iyo shirkadaha ay ayeysiinta u sameeyaan.
Malada Correio da Manhã ayaa ku doodeysa in Real Madrid ogaatay 2009 kii dacwada loo haysto Cristiano Ronaldo oo xiligaas kaga soo biirey Manchester United isla Markaana ay mudo 9 Sano ah ku bixinayeen lacago fara badan in aan banaanka lasoo dhigin balse ay ogolaadeen markii Ronaldo kaga biirey Juventus Xagaagaan.
Hadaba Real Madrid ayaa beenisey Warkaan uu daabacay Wargeyska Malada Correio ee ka soo baxa dalka Portugal iyaga oo sheegay in ay sharciga latiigsan doonaan oo ay dacweyn doonaan Wargeyskaan oo ay sheegeen in uu qoray warar been abuur ah oo aan Waxba ka jirin.